प्रियंका कार्कीलाई सल्लाह दिदै पुन्यले भने सन्सारको पहिलो आमा बन्न लाग्नु भाको जस्तो नाटक छ त – भिडियो सहित – Sandesh Press
August 7, 2021 220
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढि आ,लोचीत र ट्रो,ल बन्ने गरेकी छिन् नायिका प्रियंका कार्की । उनी अहिले ग,र्भवती अवस्थामा रहेकी छिन् । पछिल्लो समय काम गर्न छोडेकी उनी सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय रहेकी छिन् । यो अवस्थामा प्रियंका लाई भरपुर साथ दिईरहेका छन् उनका श्रीमान् अर्थात नायक आयुष्मान देशराजले ।
उनीहरुले आफ्नै तरिकाले जिन्दगी अघि बढाईरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आउने नक,रात्मक कमेन्टलाई उनीहरुले बा,लै दिएका छैनन् । प्रियंका ग,र्भवती भए देखी नै उनीहरुले एक अर्का संग एकदमै खुशी शेयर गरिरहेका छन् । यसको जानकारी उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल बाट आफ्ना फ्यानहरु लाई दिईरहेका छन् ।
प्रियंकाले आफु ग,र्भवती भएको फोटोहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्ष्टा बाट सार्वजनिक गरिनै रहेकी हुन्छिन् । उनको यो नीजि बिषय हो तर पनि कतिपय दर्शकले भने अनेकौ न,राम्रा कमेन्टहरु गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यति आ,लोचना हुँदा हुदै पनि उनीहरुले खुशी साटि नै रहेका छन् । नायिका प्रियंका कार्कीलाई केहि सुझा,ब दिदै पुन्य गौतमले केहि आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ भिडियो
Prevयौ,,,न चाहना बढाउन चाहनुहुन्छ ? यि हुन् घरेलु उपाय !
Nextएसईईको परिक्षाफल प्रकाशित, ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ उत्तीर्ण